प्रतिष्पर्धा गर्न खुवै मन पर्छ : मिस नेपाल इभाना मानन्धर - halokhabar.com प्रतिष्पर्धा गर्न खुवै मन पर्छ : मिस नेपाल इभाना मानन्धर - halokhabar.com
मिस वल्र्ड नेपाल इभाना मानन्धर आउदो साता मिस वल्र्डमा भाग लिन चीनको सान्या प्रस्थान गर्दैछिन् । मिस वल्र्ड तयारीवारे पत्रकार मनोज श्रेष्ठले इभानासंग लिएको ताजा अन्तर्वार्ता : मिस वल्र्डमा इभाना मानन्धर पुग्ने पक्कापक्की भईसक्यो, सोच्नुभएको थियो, यस्तो दिन पनि कुनै समय आउला भनेर ? त्यस्तो त सोचेको थिइन । तर, असम्भव पनि थिएन । मिस वल्र्डको तयारी कसरी भईरहेको छ ? भूकम्पले गर्दा सोचेको जस्तो सजिलै गर्न सकिएन । त्यै पनि आफुले सकेको त गरिरहेको छु । भनेपछि अहिले फूर्सद पटक्कै छैन होला ? त्यस्तै भन्न पर्ला । दौडधुप धेरै छ । जिम पनि जानै पर्यो, मेकअप लगायत अन्य धेरै कुरा सिकिरहेको छु । व्यक्तिगत विकासकालागि विभिन्न कक्षाहरु पनि लिदैछु । अनि, गाउनहरु कस्तो कस्तो तयारी भो त ? तीन वटा बुटिकबाट मैले लगभग तीन दर्जन गाउनहरु तयार गरेको छु । जहाँसम्म मलाई लाग्छ, यि गाउनहरु अन्य देशको भन्दा भिन्न छ । यसले धेरैलाई आकर्षित पार्छ भन्ने सोचेको छु । मिस वल्र्डवारे ज्ञानहरु कसरी लिरहनुभएको छ ? यसअघि मिस वल्र्डमा भाग लिएर फर्किनुभएका पूर्व मिस नेपालहरुको अनुभव नै मेरो लागि सवैभन्दा ठूलो सिकाई भयो । त्यसवाहेक इन्टरनेटबाट जानकारी हासिल गरिरहेको छु । कस्तो सुझावहरु दिए उनीहरुले ? उहाँहरुले जे जे भोगे, देखे, अनुभव गरे त्यो सवै नै भनेका छन् । उहाँहरुले दिएको सुझावमध्ये कमन भने, ‘रिजल्ट जस्तो भएपनि डराएर, रुएर नबस्नु । वरु सक्दो रमाईलो अनुभव गरेर फर्किनु ।’ कत्तिको आशाबादी हुनुहुन्छ ? आशावादी नभए त भिड्नै नगए भईगयो नि ? वीनर बन्छु भनेर दावी त गर्न मिल्दैन । त्यै पनि हिम्मत भने हारेको छैन् । रिजल्ट जस्तो सुकै आएपनि नेपालको छाप भने पक्कै छाडेर आउनेछु, यो चाही पक्का हो । यसअघिका मिस नेपालले फाट्टफूट्ट टाईटल जित्न थालिसकेको छ, तपाईलाई कस्तो दवाव पर्छ त्यसले ? होइन, मेहनत त मैले पनि कम गरेको छैन । मलाई प्रतिष्पर्धा गर्न एकदमै मन पर्छ । सायद, मैले भोगेका भोगाईले पनि मिस वल्र्ड प्रतिष्पर्धा गर्नमा सपोर्ट हुन्छ होला । भन्नाले ? म लामो समय अमेरिकामा बसे । त्यहाँ पढे, काम गरे, विभिन्न यूनिभर्सिटीमा हुने प्रतियोगितामा भाग लिन्थे । कतिपयमा जित्थे पनि । यस्ता कुराले मलाई प्सल पोइन्ट हुन्छ । मिस वल्र्डमा पनि यस्तै यस्तै कुरालाई बढी ध्यान दिने गर्छ । एक महिनाको दौरानमा हुने विभिन्न क्रियाकलापबाटै अन्तिम प्रतिष्पर्धामा छनौट हुनेगर्छ । त्यसवाहेक टाईटल विजेताले समेत सिधै टप २० अर्थात फाइनल राउण्डमा समावेस गरिन्छ । दुई वर्ष पहिलेकी मिस नेपाल इशानी श्रेष्ठले ब्यूटी वीथ अ पपोर्समा वीनर हुदै अन्तिम राउण्डमा पर्न सफल भईन, तपाईले चाही यस विद्याको लागि के विषयमा भिडियो तयार पार्नु भएको छ ? भूकम्प । नेपालमा भर्खरै गएको भूकम्पले देशमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्यायो । अव, कसरी आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई मैले फोकस गरेको छु । मिस वल्र्डबाट फर्किएपछिको योजना ? विदेशमा पढेका वा शीप सिकेकाहरुलाई भेला बनाएर केहि गर्ने सोच छ । विदेशमा सिकेको शीप र पढाईलाई नेपालमा कसरी लागू गराउने र यहाँका युथहरुलाई कसरी जिम्वेवार र आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउन सकिन्छ त्यसै क्षेत्रमा काम गर्ने सोचाई छ । सम्भव होला ? अवश्य । त्यस वाहेक पनि एउटा उद्यमी बन्ने रहर पनि छ । मेरो पढाई पनि त्यसै फिल्डसंग मिल्दोजुल्दो छ । मार्केटिङ र इन्टरप्रिनर विषयमा ब्याचलर गरेको हुँ । अनि मास्टर्स चाही ? दुई वर्षपछि नेपालको कामहरुलाई थाति राखेर मास्टर्स गर्न अमेरिका जान्छु । त्यो कोर्ष सकाएर फेरि नेपाल फर्किन्छु । अमेरिकामा छदा काम पनि गर्नुहुन्थ्यो ? गर्थे । सधै पढाई र काममा मात्रै ध्यानबढी दिन्थे । पढाई र काममा ध्यान दिनेलाई अहिले कम्फर्ट हुन्छ त ? त्यो त हुदैन । म खासै मेक गरेर हिड्दिनथे । अहिले मेकअपमा खुवै ध्यान दिनुपर्छ । धेरै कुरामा भिन्नता आएपनि सम्हाल्दै लगेको छु । ट्रान्सफर्म हुन त पक्कै पनि समय लागि हाल्छ नि । मिस वल्र्ड कहिले र कहाँ हुदैछ ? १९ डिसेम्वर २०१५ मा दक्षिण चीनको सान्यामा हुदैछ । सान्याको ब्यूटी क्राउन ग्राण्ड थिएटरमा अन्तिम प्रतिष्पर्धामा हुन्छ । त्यस थिएटरमा उपस्थित सयवढी प्रतिष्पर्धीवीच नेपालको पनि राम्रैसंग मार्केटिङ हुनेछ । २००३ मा भएको मिस वल्र्ड आयोजना गर्नैकालागि निर्माण गरिएको यो थिएटर विश्वका विज्ञ आर्किटेक्चरले डिजाईन गरेका हुन । सेभेन स्टार यो थिएटर (ब्यूटी क्राउन लभका) ‘नाइन होली ट्रिज’ स्टाइलको छ । छ लाख ३० हजार मिटर स्क्वार क्षेत्रफलमा फैलिएको यो थिएटरमा विश्वकै सवैभन्दावढी रुम छन् । जहाँ छ हजार छ सय ६८ रुमहरु छन् । एउटा ट्री स्टाईलको विल्डिङमा ८ सयवढी रुमहरु छन् । तपाई कहिले चीन तर्फ जानुहुन्छ ? आउने सातापछि जान्छु । मिस वल्र्डको प्रचारप्रसार गर्ने माध्याम ? मिस मिस वल्र्ड एप लगायत वी च्याट र जीमेलबाट प्रचार प्रचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मिस नेपाल हुन्छु भनेरै अमेरिका छाडेको हो ? अहिले त त्यसै भन्नु पर्ला । किनभने विगत तीन, चार वर्षदेखि मिस नेपालमा एक पटक प्रतिष्पर्धा गर्छु भन्ने सोच आएको थियो । मिस नेपाल हुनलाई चाहिने उमेरको हदको पनि अन्तिम वर्ष थियो । आए, मेहनत गरे र मिस नेपालको क्राउन पनि जिते । कतिको आशा थियो ? आशा त हुनुपरीहाल्यो नि ? मिस नेपाल फेयर नै हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो ? अ लाग्थ्यो । किनभने मिस नेपाल हुनेहरु बढेलेखेका वा वौद्धिक वर्गकै हुन्थे । पक्कै पनि राम्रै होला भनेरै नेपाल फर्किएको हुँ । मिस नेपालको क्राउन पहिरिएपछि गरेको सामाजिक कामहरु के के गर्नुभयो ? आफुले पनि भूकम्प पीडितकालागि थुप्रै सहयोग गरियो । जसले मलाई हर्षित बनायो । सहयोगसंगै मैले धेरै कुरा सिक्ने र देश देख्न पाए । जीवनमा यो भोगाईले धेरै कुरा सिकायो ।